ट्रम्पसँग हात मिलाएका यी व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएको खुलासा, विश्वभर हलचल, अब के होला ? — Sanchar Kendra
ट्रम्पसँग हात मिलाएका यी व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएको खुलासा, विश्वभर हलचल, अब के होला ?
काठमाडौँ । गत वर्षको अन्त्यबाट चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रकोप विश्वका एक सय भन्दा धेरै मुलुकसम्म पुगिसकेको छ । यसबाट एक लाख ६ हजारभन्दा धेरै संक्रमित छन् भने ३६ सय जनाभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ ।
गत वर्षको अन्त्यबाट चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रकोप हालसम्म एक सय भन्दा धेरै मुलुकमा फैलिसकेको छ । कोरोनाका कारण इटालीले १ करोड ६० लाख मानिसहरुलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न आह्वान गरेको छ । हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर ३६ सय जनाको ज्यान गइसकेको छ भने अरु एक लाख भन्दा धेरै संक्रमित छन् ।
यस्तै कोरोना भाइरस ‘कोभिद–१९’ हाल ८५ भन्दा बढी मूलुकमा फैलिएको छ। यसको संक्रमणबाट आइतबारसम्म ३५ सय मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १ लाख ५ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। अहिलेसम्म ५८ हजारभन्दा बढि संक्रमित निको भइसकेका छन्।
आजको मितिसम्म कोरोनाभाइरसको कुनै औषधि बनेको छैन। कुनै औषधि प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छैन। तर, भाइरसबाट संक्रमितलाई उपयुक्त उपचार दिनुपर्छ, हेरबिचार गर्नुपर्छ। केही विशेष उपचारका पद्धतिहरु अनुसन्धानका क्रममा छन्। ती चाँडै परिक्षण हुनेछन्। डब्लूएचओले कोरोनाभाइरस रोकथामविरुद्धको अनुसन्धान र अभियान तिव्रताका साथ अगाडि बढाउन साझेदारहरुलाई सहयोग प्रदान गरिरहेको छ। (डल्बूएचओको साइटबाट)